कानूनमा त लेखेको छ तर म मान्दिन - कानूनलाई न मान्ने यस्ता कर्मचारीलाई के भन्ने? (२०७३ भाद्र १०, शुक्रवार)
यो प्रसंग यो लेखक यौटा मंदिर र बृद्धाश्रम को नवीकरण गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएको दिनको हो । ५- ५ वर्षको नियमित नवीकरण भैरहेको संस्थाको आवश्यक दस्तुरी साथ आगामी ५ वर्षको लागि पुनः नवीकरण गर्न भनि दिएको निवेदनमा प्रव्रिmया पुरा भै अभिलेखहरुमा नवीकरण गरी सके पछि सेकेन्ड म्यान का सामुन्ने पेश हुँदा ५ वर्षको नवीकरण एकै चोटी हुदैन भन्नु भयो । किन र ? कानुन मा ५ वर्ष सम्मको नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ , स- साना मन्दिर, मस्जिद, भजन मण्डली, आमा र दिदी बहिनी समूह अदि लाई त ठाढै नवीकरण गरि दिने भनि सरकार को परिपत्र पनि छ, म स्वयं ले पनि पदमा रहँदा कतिपय संस्थाहरुलाई ५ वर्षको नवीकरण गरेको छु । कुनै कानूनमा "गर्न सकिने छ " भनेर लेखिएको छ भने त्यसको अर्थ हाकिमले मनपरी गर्न पाउने अधिकार होइन कि हाकिमले सेवा ग्राहीको पक्षमा सकारात्मक रहेर औचित्यपूर्ण बस्तुगत निर्णय दिनु पर्ने कानुनी व्याख्या छ । झुकाव सेवाग्राही पट्टी देखिनै पर्दछ भनें । तर वहाँले संस्थाले वर्ष वर्षमा साधाण सभा गरे नगरेको थाह पाउनलाइ नवीकरण वर्षेनी गराउनु पर्दछ भन्नु भयो । मैले अनि यो ५ वर्षको कुरा कानूनमा किन लेखेको होला ? भनि सोधदा वहाँले म त जुन जुन जिल्ला मा बसेको छु , यो ५ वर्षे नियमलाई नै ब्रेक लगाएको छु लिखितै पत्र दिएर रोकेको छु भन्दै फाँटवालालाई ५ वर्षे नवीकरण रोक्ने निर्देशन पत्र लेखेर ल्याउनुस म दस्तखत गरि दिन्छु भन्ने सम्मको आदेश गर्नु भयो । म त तीन छक्क परेँ । कानून को व्यस्थालाई रोक्ने भनि हाकिमले लिखित आदेश दिन सकने कस्तो स्थिति ? कस्तो देश र कस्तो प्रशासन ?
मैले लेखेका हाम्रा देशका यी कुरा हाम्रा दोष होइनन् । हाम्रो हाकिमी मानसिकता, संस्कार र हाम्रो चलन हो जसमा जनता पिल्सिएको छ । हामीले आफ्ना समकक्षी अर्काे ठाउँ को कार्यालयको कागज सुधार गर्न कल्पना नै गर्न सक्दैनौ तर, "मूड" बन्यो भने काम हुन्छ । शनक चल्यो भने जति सुकै मिल्ने काम भए पनि नहुन सक्दछ । उनीहरु कानून र विवेकको प्रयोग गर्छन्, तर हामीले शनक र बुद्धिको बढी प्रयोग गर्दछौं ।
अमेरिका कै दुइटा उदाहरण अरु पनि । दुइ जनाले यौटा घर खरीद बिक्री को कुरा गरेछन् । कुरा मिल्यो बिक्रेता र बिक्रेता घरमा बसेर यल ष्लिभ बिक्री फार्म भरेर मालपोत कार्यालयमा इमेल गरे । कार्यालयले बिक्रेता संंग जग्गा धनी प्रमाण पत्रको "सील" पठाउन भन्यो उसले हुलाकबाट शील पोस्ट गरी दियो । दोश्रो दिन खरीद कर्ताको नाममा हुलाक मार्फत नयाँ सिल आयो । रजिष्ट्र्ेशन दस्तुर अनलाइन पठाई दिए पुग्यो । न्यूयोर्क राज्यको एक जना मानिसले चालीस करोड भन्दा माथिको कारोबार टेक्सस राज्य मा गर्ने भन्ने कम्पनी दर्ता गर्न टेक्ससमा रजिष्ट्रर को कार्यालयमा विनियम सहित अनलाइन निवेदन पठायो । रजिष्ट्रर ले तपाई को विनियम तपाईको वकीलले प्रमाणित गर्ने हो कि ? कम्पनी को वकीलले ? भनेर सोधि पठायो । सेवाग्राहीले कम्पनीबाट गराई दिनुस भन्यो र चौथो दिन उसलाई कम्पनी दर्ता भएको इमेलमा प्रमाण पत्र हुलाक बाट आउदै छ भनेर जानकारी आयो । सेवाग्राही ले टेक्सस को यौटा साथीको घर को ठेगाना मात्र देखाउनु परेको थियो । काम सकियो ।